मतदान सकियो कसले मार्ला वाजी ? « Sajha Page
मतदान सकियो कसले मार्ला वाजी ?
काठमाडौं,२९ फागुन |संघीय संसद र प्रदेशसभाका सदस्यले नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान गरेका छन् । बानेश्वरस्थित संसद भवनमा विहान १० देखि दिउँसो ३ बजेसम्म राष्ट्रपतिका लागि मतदान भएको हो ।
शपथ ग्रहण नगरेका राजपाका रेशम चौधरी, राष्ट्रियसभामा मनोनित ३ र मनाङका प्रदेशसभा सदस्य राजीव गुरुङ मतदातामा सहभागि भएनन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम र राप्रपाले भण्डारीको पक्षमा मतदान गरेका छन् । राप्रपा प्रजातान्त्रिकले भने राईलाई मत दिएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी कानुनअनुसार संघीय सांसदको ७९ र प्रदेशसभा सदस्यको ४८ मतभार कायम हुन्छ । एमालेको २३ हजार ३ सय ५६, माओवादी केन्द्रको १० हजार ३ सय १९, संघीय समाजवादीको ३ हजार १ सय ९८ र राजपाको २ हजार ८ सय ४५ गरी भण्डारीको पक्षमा कम्तिमा ३९ हजार ७ सय १८ मत परेको अनुमान छ । राष्ट्रपति निर्वाचित हुन खसेको मतको कम्तिमा ५० प्रतिशत कटाउनु पर्छ ।
राईका पक्षमा कांग्रेसका १ सय ८९ सांसदको समर्थन रहेकाले ११ हजार ४ सय २८ मत खसेको अनुमान छ । यसबाहेक १० वटा साना दलसँग १ हजार ६ सय ४९ मत छ । भण्डारीको जीतका लागि आवश्यक मत सुरक्षित रहेकाले साना दलले जता मत हाले पनि त्यसले जित–हारका लागि खास अर्थ राख्ने देखिँदैन । मतदान सकिएकाले निर्वाचन आयोगले गणनाको तयारी सुरु गरेको छ ।-न्युज२४बाट